Safiirka Britain ee Somaliya Danjire Matt Boug oo Garowe kulan kula qaatay Madaxweynaha Puntland. – Radio Daljir
Febraayo 26, 2013 6:46 b 0
Wafti uu horkacyay safiirka dowladda Britain u fadhiya Soomaaliya Danjire Matt Bough? ayaa maanta soo gaarey magaalada Garowe ee xarunta Puntland.
Waftiga safiirka waxaa magaalada Garowe kusoo dhaweeyay mas?uuliyiinta Puntland oo uu kamid yahay madaxweynaha Puntland C/Raxmaan Maxamed Maxamuud? (Faroole) iyo qaar kamid ah golihiisa xukuumada.
Waftiga safiirka waxaa ku wehliyay deeq bixiyayaal, saraakiil amni iyo quburo dhinaca axsaabta ah, Waxaana? soo dhaweynta kadib ay? kulan albaabada ulaaban yihiin xarunta madaxtooyada Garowe kula qaateen madaxweynaha Puntland.
Markii uu dhamaaday kulanka albaabada ulaabanyihiin ayaa shir?jiraaid waxaa saxaafada u qabtay madaxweynaha Puntland iyo Safiir Britain Matt Bough
Madaxwayne (Faroole)? ayaa sheegay waftigaan inay uyimaadeen sidii ay? qiimeyn ugu sameyn lahaayeen? xaaladda amni ee Puntland iyo la socashada? halka uu marayo nidaamka axsaabta badan ee ay qaadatay Puntland.
Madaxweynaha Puntland waxaa kaloo uu sheegay inay waftidaan ka caawindoonaan Puntland howlaha doorashooyinka? soo socota ee 2014.
Safiirka Britain ee Soomaaliya Matt Bough ayaa sheegay inuu ku farax san yahay imaatinkiisa Puntland. Waxaana uu sheegay Puntland inay kala shaqayn doonaan nidaamka axsaabta badan iyo dardar-galintiisa.
Matt Bough wuxuu sheegay inay ku howlan yihiin sidii Soomaaliya looga dhalinlahaa nabad loona ballaarinlahaa mashaariicda Britain ee Soomaaliya.
Imaatinka Matt Bough ayaa wuxuu ku soo beegmayaa, Iyadoo dhawaan dowladda Britain ay sheegtay in maamulka Puntland ay ku? caawinaysaa amshaariicda hormarineed oo lagu dhisayo xabsi waaweyn oo loogu talagalay maxaabiista Burcadbadeeda.
C/wali Maxamed Shiikh?